Indlu eyigumbi eli-1 egcekeni elivikelekile
Ukuqasha igumbi elizimele ngama-euro angu-9 ngobusuku ngabunye ngaphambi kokwehla kwezintengo). Kunelinye igumbi elingumakhelwane elingaqashwa ngama-euro angu-9. Igceke elivikelekile elithule kakhulu. Ishawa nendlu yangasese kusegcekeni elingamamitha ayi-10 futhi kwabelwana phakathi kwamagumbi amabili. Ifakwe amafeni namanethi omiyane efasiteleni, emnyango nasemibhedeni. Igceke liyatholakala kubahambi.
Lezi zindawo zokuhlala zisenkabeni yedolobha futhi zithule kakhulu. Singakwamukela esiteshini sebhasi, sinikeze izinkambo nezinkonzo (izidlo zasekuseni, ukuhlanza izingubo, ukuvakasha kokubuka indawo, njll.). Siphinde futhi sihlele izifundo zokubaza zethusi kanye ne-ceramic uma sicelwa.
I-qu. i-artier ingeyendabuko futhi igcwele ama-artisan. Zonke izitolo namatekisi aqhele ngamamitha angama-20. amagumbi amabili aqashwayo esikhungweni sobuciko saseTatababa, esinendawo yokusebenzela yethusi yendabuko kanye nezindawo zokubukisa kanye nezindawo zokwamukela izivakashi. Singahlela ama-workshops noma izindawo zokuhlala zabaculi ngethusi, umdwebo we-batik ceramic. Bona imininingwane eyengeziwe ngesikhala seTabaTaba ku-fb
Ngiyabamukela abahambi futhi uma ngingekho, kuhlala kunonogada egcekeni futhi umngane okhuluma isiFulentshi ngokuphelele uzokwazi ukukwamukela futhi akuqondise.